ABIN bakka bu’uun magaalaa Asallaa irratti filanoof dorgoma. ABO fi KFO filannoo keessaa baasanii ABIN dorgomshisuuree? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsABIN bakka bu’uun magaalaa Asallaa irratti filanoof dorgoma. ABO fi KFO filannoo keessaa baasanii ABIN dorgomshisuuree?
ABIN bakka bu’uun magaalaa Asallaa irratti filanoof dorgoma.
ABO fi KFO filannoo keessaa baasanii ABIN dorgomshisuuree?
Obbo Leencoo Lataa Gaaddisa Hooggansa Oromoo qindeessuuf Abiy Ahmed dhaaf waadaa sobaa galeera. Kanaafis torban dhufu keessa magaalaa Bishooftuutti walgahii dhoksaa jalqabaa gaggeessuuf waamichi taasifamaa jira.
Yaa Obbo Leencoo:
Hooggantootni Oromoo mana hidhaa wayita jiranitti, Oromoon mana hidhaa keessaa baafamee wayita ajjeefamaa jirutti gaaddisni ati qopheessitu gaaddisa muka baala hin qabneeti. Ergama addaa filannoo fakkeessaa kana Oromootti fakkeeffamee darbamuuf jiru milkeessuuf fiiginsi kee olii fi gadii ni argama; ni beekama. Shira kamuu itti ejjennee saaxilla
Aabb Leencoo Lataa fi Dr Diimaa Nagawoo ABO erga lagatanii bubbuleera. asdhihoo kanammoo Epp/Bilxiginnaatti Joined goone jedhanii afaan isaaniin nuttihiman”Gorsitoota Coloneel Abiyyii hooggansa Bilxiginnaa tahaniis hojjechaati jiru.
amma asdeebiyanii dhimma ABO irratti qorannoo goonaa maal goonaa jedhaniiti waan waliin hindeemne walitti bukeessuu barbaadu.
Saboo jaarroleenkun usanii waan Rabbi hireef nyaatanii hintaa’anii sabni haafalmatuutii?
የብልፅግና አባል ወይም ደጋፊ የሆናችሁ ጓደኞቼ አንድ የምጠይቃችሁ ነገር ነበረኝ
በፊንፊኔ ይገነባል ብላችሁ የነበረው የወንድማችን የሀጬኮ የመታሰቢያ ሀውልት ግን ከምን ደረሰ?
“Shira ABO irratti qophawee “
“ Inter-Oromo Dialigue “
Naqarsa Qabsoo Bilisummaa Oromoo Leencoo lataa shira mayii ABO irraatti yaaluuf walgahii waamaa jirachuu biraa gahamee. Leencoo Lataa,Diimaa Nagawwoo fi fakkaattonni dirqamaa PP irraa fudhataan torban dhufu walgahii iccitii guddaa gaggeessuuf sagantaan qabame keessaa tokko Bishooftuutti gaggeeffachuuf namoota lakkoofsaan xiqqoo ta’e waamanii jiru. Gantuu Leencoo lataa fi wahelloonni isaa Balbala cufannee waa’ee ABO irraatti marihanna jedhaa jiru. Bu’aan walgahiicha ABO jijjira jedhanii sageentaffatanii jiru!!
Abiyyi Ahimed Isayyaas Afuwerqii dhooksan Magaalaa Asmaraatti marii irra jiraachuun beekkameera!!
Abiyyi jaarsa dullacha miila irra kufee kadhachaa jira jadha Odeessi amma dhufe..
Ee USA qoosaa hin beektu sa’a isiniif kennametti fayyadamuu qabdan..
Waltajjichi akkuma xumurameen raawwii isaa isin beeksisna nu hordofaa…!!